कोरोनादेखि यती घातक रोगको औषधि गुर्जो ? गुर्जोका फाईदै फाईदाहरु (भिडियो सहित) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकोरोनादेखि यती घातक रोगको औषधि गुर्जो ? गुर्जोका फाईदै फाईदाहरु (भिडियो सहित)
November 2, 2020 admin समाचार 7679
मोरङ । आज भोली बजारमा गुर्जोको माग बढेको छ । खेतबारी र जंगलमा पाइने यो वनस्पतिबारे यसअघि कमैलाई मात्र थाहा थियो । कोराना महामारी बढ्दै गएपछि गुर्जोको माग बढेको विज्ञ बताउँछन् । यो कोरोनाको औषधि होइन तर मिलाएर खाएमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने विज्ञ बताउँछन् ।
गुर्जो जुनसुकै उमेर समूहले पनि खान मिल्छ । खाने तरिका भने उमेर र तौलअनुसार फरकफरक हुन्छ । ‘आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाहअनुसार खानुपर्छ । आफ्नै तरिकाले मात्रा निर्धारण गरेर खानु घातक हुन सक्छ’, वैद्य भन्छन् । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि गुर्जोको माग धेरै भएको उनी बताउँछन् ।
मागअनुसार सेवाग्राहीसमक्ष पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गुर्जो समुद्री सतहको ३०० मिटर देखि १८०० मिटरको उचाइमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा पाइन्छ । यो लहरा प्रजातिको वनस्पति हो । तराई तथा चुरे क्षेत्रमा पाइने गुर्जोको पात पानको जस्तै हुन्छ । यसको डाँठ फुस्रो हुन्छ।
महाभारत पर्वत शंखलामा पाइने गुर्जोको कालो डाँठ हुन्छ । उच्च हिमाली भूभागको सेपिलो भागमा पाइने गाने गुर्जो औषधीय उपयोगका हिसाबले उत्तम मानिन्छ । संस्कृतमा गुडुची वा अमृता भनिने गुर्जोको बोटानिकल नाम टिनोपोरा कोर्डिफोलिया हो । बैद्यका अनुसार गुर्जोको पातमा क्याल्सियम प्रोटिन फस्फोरस प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यो कमलिपत्तको प्रभावकारी औषधिहो । गुर्जोको डाँठमा स्टार्च सँगसँगै यसमा एन्टिबायोटिक र एन्टिब्याक्टेरियल गुण प्रशस्त पाइन्छ । रगतको शुद्धता र वृद्धि, हृदयाघातको जोखिम न्यूनीकरण, मधुमेह नियन्त्रण र छालामा चमक, मुहारमा कान्ति वृद्धिकाका लागि उत्तम मानिन्छ ।
आज कार्तिक १८ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयार गर्नुहोस
December 25, 2020 admin समाचार 2299
लामो समय पछि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजे दखि लागू हुनेगरी प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घटाएको हो।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार निगमले ग्यासको मूल्य
November 19, 2020 admin समाचार 3954
आज एकै दिन सुनको मूल्य भारि गिरावट आएको छ ?
November 24, 2020 admin समाचार 2783
आज मंगलबार बजारमा सुनको मूल्यमा एकै दिन भारि गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार तोलामा १८०० रुपैयाँले घटेको छ । छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोलामा ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ
LEX 18 agenda conversation: Job club (544594)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515044)
Hello world! (436006)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398453)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109035)